Qof Noocee Ah Ayuu Ahaa Cali Cabdalla Saalax? | WAJAALE NEWS
December 5, 2017 - Written by Reporter:
Hargaysa(W,N)-Cali Cabdalla Saalax ayaa saamayn wayn ku lahaa siyaasadda Yemen muddo tobannaan sano ah intii uu madaxweynaha ahaa iyo xitaa markii uu xilka ka dagayba.
Dhisamashiisii 4tii Decembar ayaana dhacday maalmo uun ka dib markii uu soo afjaray xulafadii uu la ahaa jabhadaha Xuutiyiinta ah, iskaashigaas ayaase soo jiray saddex sano oo uu dalkaas ka taagnaa dagaal sokeeye.
Cali Cabdalla Saalax wuxuu dhashay 21 March 1942dii, wuxuuna ka soo jeedaa qabiilkaa Sanhan.
Hal bil ka dibna, baarlamaankii Waqooyiga Yemen ayaa madaxweyne u doortay.Saalax ayaa taageero ka helay qabaa’illadii dagaalamayay, waxaana dad badan oo xaaladda la socday ka yaabisay in mar kale la doortay 1982dii, oo waliba haddana dib loo soo doortay lix sano ka dib.
Doorashadii u horraysay ee xor ah xisbiga Saalax ee GPC ayaa ku guulaystay kuraasta intooda badan, laakiin dawlad wadaag ah ayuu la sameeyay xisbiga YSP iyo xisbigii diinta ee Islaax.
Rabshado ayaana wali sii hadheeyay siyaasadda Yemen.
Jabhado dib ugu soo noqday Yemen 1990-kii oo ka soo dagaalamay Afghanistan iyaga oo ka soo horjeeda midawgii Soofiyeet ayaa sii huriyay colaaddii Yemen.
Afduubka ayaana meel aan waxba laga qaban karin gaadhay. Dhacdooyinkaas ayaase badankood ahaa kuwo aan dhiig ku daadanin tan iyo markii la afduubtay 16 ruux oo dalxiiseyaal reer galbeed 1998-kii, dagaal arrintaas ka billawday ayaana horseeday in ay dhintaan afar ka mid ahaa dalxiiseyaashii.Bishii October ee 2000, Markab kuwa wax burburiya ah ee Maraykanku leeyahay oo la yidhaahdo USS Cole ayay bambooyin la dhaceen xubno ka tirsan dadka jihaad doonka ah, kaas oo ku sugnaa dekedda Cadan waxaana halkaas ku dhintay 17 badmaax oo Maraykan ah.
Rabitaan la’aanta dawladda loo hayay ayaa koradhay markii uu Saalax Maraykanka u ogolaaday in ay ugaadhsadaan Malayshiyaadka wixii dhacdadaas ka dambeeyay.
Bishii June ee 2004-kii ku xigeenkii hore ee gudoomiyaha baarlamaanka Xuseen al-Xouti oo calaaqaad la lahaa Lubnaan ayaa billaabay dagaal hubaysan oo ka dhan ahaa xukuumadda.
Musuqmaasuq baahay ayaa gacan ka gaystay in ay sare u kacdo saboolnimadu intii uu talada hayay, bishii Luulyo ee 2005tiina tobanaan ruux ayaa la dilay ka dib markii ay dhaceen mudaaharaadyo lagaga soo horjeeday dawladda oo joojisay qiimihii ay ku kabi jirtay sicirka shidaalka.Saalax ayaa mar kale loo dhaariyay xafiiska bishii Sabtembar ee 2006dii ka dib markii uu helay 77% ka mid ah codadkii la dhiibtay.
Ka dib markii Saalax lagu soo daweeyay Maraykanka wuxuu Yemen dib ugu soo laabtay bishii Feberwary ee 2012kii dibad baxyo hor leh ayaana billawday.
Bishii Feberwaryna 27keediina si rasmi ah ayuu madaxweyne ku xigeenkiisii Cabdrabbah Mansour Hadi ugu wareejiyay awoodda, ugu dambaynna wuu is casilay.
Wixii 2014kii ka dambeey Saalax iyo ciidammadii daacadda u ahaa waxay taageereen jabhadaha Xuutiyiinta ah kuwaas oo qabsaday magaalada Sanca madaxweyne Hadi-na ku qasbay in uu Sacuudiga u firxado.Xulafadan isu haboonida darnaa ayaa dagaaal la galay Sucuudiga iyo xulafadiisa oo qorshahoodu ahaa in ay dib u soo celiyaan madaxweyne Hadi, balse dagaalkaas ayaa burbur baax leh u gaystay Yemen sannadkii 2015kii.